Ifektri kanye nabakhiqizi abahamba phambili be-Organic black walnut HaiRui
Uwoyela omnyama wama-walnut
25kg / isigubhu
3 Ton / Amathani Inyanga ngayinye
IShanghai / iShenzhen Port, eChina
Ubuningi (Amakhilogremu) 1 - 5000 > 5000
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe, sicela uxhumane nathi!
1.izimpahla zingafika ngesikhathi?
Inkampani yethu isayine ukwabiwa unomphela kanye nokubambisana nenkampani enhle yokudlulisa impahla, ngakho-ke izimpahla zethu zivikelwe ngumthetho. Akuvamile ukuthi sikhale ngokubanjezelwa.
2. ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi yemikhiqizo yakho?
Ekuqaleni, sinepulazi lethu, ngakho-ke izinto zokusetshenziswa zingokwemvelo; futhi sinezindawo zokuhlola ezisezingeni eliphezulu zokuhlola ikhwalithi nezindawo ezahlukahlukene zokuhlola ukuhlolwa. yini enye inkampani yethu ezuze i-MDSN,Izitifiketi ze-COA.
3.ngazi kanjani ukuthi imikhiqizo yakho ifanelekile?
4. kungani kufanele sikhethe imikhiqizo yenkampani yakho?
Ngoba inkampani yethukuyinto engabizi ngentengo ngenkathi ikhwalithi enhle kakhulu, inethimba lezentengiselwano elisebenza kahle kakhulu futhi elinomthwalo wemfanelo, semukele futhi sincoma amakhasimende ethu, futhi sizoqhubeka nokuhlinzeka ngemisebenzi eqotho, ikhwalithi engcono kakhulu kanye namanani akhokheleka kakhulu, ukubambisana nawe ngekusasa ukuthuthuka nokuchuma. Nginesiqiniseko sokuthi inkampani yethu ingukukhetha kwakho okunengqondo!
Alibaba Zezıhlabane Okuthengisa Isipho uwoyela Yemvelo ebalulekile ...
Intengo yemvelo engu-Lemongrass emsulwa ebalulekile
Amafutha embewu kaRosehip asezingeni eliphakeme lentengo enhle
I-cosmetic doterra Patchouli amafutha abalulekile we-gout
I-Eucalyptol Yemvelo Nemsulwa
I-Borneol Flakes Bulk D-Borneol Powder